बन्दको आंशिक प्रभाव : काठमाडौँमा विहानै दुई ट्याक्सीमा तोडफोड ! - Kendrabindu Nepal Online News
बन्दको आंशिक प्रभाव : काठमाडौँमा विहानै दुई ट्याक्सीमा तोडफोड !
३० बैशाख २०७५, आईतवार ०८:२२
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सरकारले अरुण–३ शिलन्यास लगायतका राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै आज गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव आंशिक देखीएको छ । बन्दकर्ताले विहानै देखि सवारी साधनमा आगजनी गर्नुको साथै तोडफोड गरेको समाचार आईरहेको छ । काठमाडौँमा विहानै दुई ट्याक्सीमा तोडफोड भएको खबर छ ।
त्यसैगरी झापाको मेचिनगर नगरपालिकामा सुर्योदय यातायात प्रा.लि.को बसमा अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराएको गराएको छ बताइएको छ । बिस्फोटबाट बस पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । त्यस्तैगरी झापाको बुट्टाबारिमा पनि बम फेला परेको छ । झापाकै सुरुङ्गामा बम विस्फोट भएको छ । बिस्फोटबाट क्षति भने भएको छैन ।
त्यसैगरी बिहान चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको भाटभटेनीमा विष्फोट भएको हो । घटनाको विवरण आउन बाँकी छ । यस्तै खैरेनी नगरपालिकाको पर्सा बजार, राप्ती नगरपालिकामा रहेको चिप्ले स्थित वडा नम्वर १ को कार्यालयमा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ ।
बन्दको प्रभावले चितवन, झापा, धरान, विराटनगर, बर्दिबास, पोखरा, नवलपरासी, बुटवल, कञ्चनपुर, काठमाडौं लगायत देशैभरीका विभिन्न ठुला साना शहरमा यातायात चल्न सकेका छैनन् भने बिहानै देखि सडक सुनसान रहेको छ । शनिबार नेकपाका महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्ति निकालेर बन्दको आह्वान गरेका थिए ।
Prevसुनसरीमा भैंसी सुन्दरी प्रतियोगिता सम्पन्न !
धादिङमा दुई वटा भारतीय ट्रकमा आगजनीNext